တရုပ်နှစ်သစ်ကူး ၂၀၁၄ လက်ရွေးစင် ပုံရိပ်များ – Lunar New Year 2014 – ၂ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Cultures » တရုပ်နှစ်သစ်ကူး ၂၀၁၄ လက်ရွေးစင် ပုံရိပ်များ – Lunar New Year 2014 – ၂
တရုပ်နှစ်သစ်ကူး ၂၀၁၄ လက်ရွေးစင် ပုံရိပ်များ – Lunar New Year 2014 – ၂
Posted by Kyaemon on Feb 17, 2014 in Cultures, Education, Entertainment, Photography, Society & Lifestyle, Travel |6comments
UK ယူကေက တရုပ်နှစ်ကူးဓာတ်ပုံတွေကို ရှာဖွေပြီးတင်ဆက်လိုက်တာပါ၊
တရုပ်ပြည်”မ”မှာကျင်းပတဲ့ တရုပ်နှစ်ကူးပွဲ အခမ်းအနား တွေကလွှဲလို့
လန်ဒန်က တရုပ်နှစ်ကူးပွဲ အခမ်းအနား ဟာ ကမ်ဘာမှာ
Chinese New Year 2014: London celebrations – Telegraph
Hundreds of thousands celebrate at Chinese New Year parade in London
Hundreds of thousands celebrate at Chinese New Year parade in London – News – London24
Hundreds of artists have flown over for the momentous occasion. Last year’s celebrations drew around 500,000 spectators.
Vancouverဗန်ကူဗာမြို့၊ San Francisco စန်ဖရန်စစ်ကိုမြို့ နဲ့ Sydney စစ်ဒနီမြို့တို့ကလဲ
၎င်းတို့မှာကျင်းပကြတဲ့ တရုပ်နှစ်သစ်ကူးပွဲ အခမ်းအနားတွေကဘဲ
အဲလို ဒုတိယ လိုက်ပြီး ကြီးကျယ်ခန့်ညားဆုံး ဆိုပြီး အားကျမခံ
ဓာတ်ပုံကရှုခင်းတွေကို “တဝကြီး” လိုက်ကြည့်မယ်၊
လန်ဒန်မြို့တော်ခန်းမ က လက်စွဲမီးအိမ်တွေလှလှပပ
လူနှစ်ဦး ပါဝင်တဲ့ ခြင်္သေ့ အ”က” လဲ ပညာပါ၊
လူတွေမြင်အောင်TV တီဗီ အကြီးနဲ့ထောင်ပြ၊
လူဖြူတွေပါစိတ်ဝင်စားကြတဲ့ သိုင်း ပညာ အစွမ်းပြ
အမျိုးသမီးတွေပါဝင်တဲ့ နဂါးအ”က” လူကြီးလူငယ် ကြိတ်ကြိတ်တိုး၊
လူဖြူကလေးတွေပါ ဟန်ပါပါ ပါဝင်ဆင်နွဲ နွေးနွေးထွေးထွေးခင်ခင်မင်မင်
လူမဲပါမကျန် ပါဝင်ဆင်နွဲ နွေးနွေးထွေးထွေး ခင်ခင်မင်မင်
သိုင်း အစွမ်းပြ မျိုးစုံ
ရှေးဟောင်းအဝတ်အစား ဆင်ယင်ပုံနဲ့Opera အော်ပရာ ဇာတ်လမ်း
အင်္ဂလိပ်တွေတော်တော်ပါဝင်တဲ့ ခြင်္သေ့ အ”က” နဲ့သိုင်းအဖွဲ့တွေ
ဝန်ကြီးချုပ်David Cameron ရဲ့ ၂၀၁၄ တရုပ်နှစ်သစ်ကူးမိန့်ခွန်း
Chinese New Year 2014: David Cameron’s speech – Speeches – GOV.UK
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း၂၀၀၀ အနက်က နှစ်ပေါင်း ၁၈၀၀ လောက်မှာ
တရုပ်နိုင်ငံက လူသန်းပေါင်း ၇၀၀ ကိုဆင်းရဲမွဲတေတဲ့ဘဝ ကနေပြီး မြှင့်တင်ပေးနိုင်ခဲ့တာဟာ
ဘယ်နိုင်ငံက ဘယ်သောခါမှ မစွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ပါကြောင်း၊
The purpose of tonight is to celebrate, and I think we haveanumber of good things to celebrate. We can celebrate the extraordinary success of modern China. I was so struck by this on the recent visit that I made and the very good meetings I had with the President and the Premier, the huge business delegation that I took. China is set once again to become the world’s largest economy,aposition it has held for 18 of the last 20 centuries, so in many ways the order is being restored. And it’s worth remembering that in that extraordinary economic performance, more than 700 million people have been taken out of poverty; more people lifted out of poverty than in any other country at any other time in the world. So, there’sahuge amount to celebrate in this extraordinary success that is modern China….
The third thing we must celebrate tonight is what Chinese people bring to our country here in Britain. We don’t haveahuge Chinese diaspora in our country, but we haveadiaspora that contributes hugely more than the numbers suggest, contributing massively in business, in the arts, in culture, of course, in one of my favourite things which is Chinese food. But it’s really worth noting that when you look across all the different people who live in the UK, the Chinese in Britain are some of the most hardworking, some of the most best educated, some of the most law abiding, some of the most solid citizens of our country. Chinese teenagers – almost 78% of them – get5good GCSEs, and I wish that was the case for every child in our country. That isafull 20 points ahead of the average. So, we really welcome what Chinese people bring to our country here in Britain and the amazing contribution that you make….
တရုပ်နိုင်ငံက အင်္ဂလန် ရဲ့ အခြေခံအဆောက်အအုံ၊အနုမြူစွမ်းအားလုပ်ငန်း၊ရေလုပ်ငန်း စတဲ့
ခဲရာခဲဆစ်လုပ်ငန်းပါမရွေးဘဲ ၎င်းတို့မှာလဲ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြောင်း၊
But we also welcome the most extraordinary diverse range of Chinese investment into our economy, and not just in sectors that are easy to invest in, but also we welcome investment in infrastructure, investment in our nuclear industry, investment in our water industry….
ဝန်ကြီးချုပ်David Cameron ရဲ့ ၂၀၁၃ တရုပ်နှစ်သစ်ကူးမိန့်ခွန်း
David Cameron – 2013 Speech to Chinese New Year Reception | ukpolitics.org.uk
ယူကေ ဒုဝန်ကြီးချုပ် က နှုတ်ခွန်းဆက်
Chinese New Year 2014: message from the Deputy Prime Minister
Nick Clegg welcomes the Year of the Horse and pays tribute to the invaluable contribution made by Britain’s Chinese communities.
I want to wish everyone celebrating, across the UK and world,aHappy Chinese New Year. And let me join you in welcoming the Year of the Horse.
This is the biggest event of the Chinese calendar. It’satime when families and friends – old and new – come together to honour the traditions of this great festival and enjoy the fireworks.
နိုင်ငံရဲ့ ရပ်ရေးရွာရေးနဲ့စီးပွါးရေး ကိစ္စရပ်တို့နဲ့စပ်လျဉ်းပြီး၊
ဗြိတိန်ကတရုပ်အနွယ်တို့ဟာ အထူး အထောက်အကူပြုကြိုးပမ်းပေး
ဒီလိုပံ့ပိုးတာဟာ လွန်စွာမှ တန်ဘိုးအနဂ္ဃရှိကြောင်းကိုအသိအမှတ်လဲပြုရင်း
ပဌမ ကမ်ဘာ့စစ်ပွဲကြီး နှစ်တရာပြည့်အထိမ်းအမှတ်
အသက်စတေး စွန့်စားပေး ခဲ့တာတွေကို၎င်း၊
This is alsoachance for us to recognise and pay tribute to the invaluable contribution made by Britain’s Chinese communities across our economy and society. And, this year, as we commemorate the centenary of the First World War, it’s important that we remember the bravery and incredible sacrifices made by the Chinese Labour Corps…..
လဲ တသားတည်း အံဝင်ဂွင်ကျ ဖြစ်နေပါကြောင်း၊
I wish all of the UK’s Chinese communities, and Chinese communities around the world,avery Happy New Year in 2013. Chinese communities in the UK hugely enrich our country, have integrated well into British society and becoming more visible in public life. …..
တရုပ်အနွယ်ဘွားတွေက ယူကေကို”စ”ရောက်တာကLiverpool လီဗာပူးမြို့ဖြစ်ကြောင်း
အောက်ပါပုံတွေဟာ ၎င်းမြို့မှာကျင်းပတဲ့ ၂၀၁၄ တရုပ်နှစ်သစ်ကူးပွဲကပါ၊
Liverpool မြို့တော်ဝန်က မိမိရဲ့ရာထူး ရွှေတံဆိပ်ကိုချိတ်စွဲပြီး
]Chinatown, Liverpool – Wikipedia, the free encyclopedia
The Chinatown in Liverpool, England (Chinese: 利物浦 唐人街 pinyin:lì wù pŭ táng rén jiē) is located near the city centre’s southern edge close to Liverpool Cathedral, and is home to the oldest Chinese community in Europe. The arch located at the gateway is also the largest, multiple-span arch of its kind outside of China, the largest single-span arch being located in Washington D.C. 2007 estimates state 1.7% of Liverpool’s population as being of full Chinese descent (some 7,400 people), making it the city’s single largest non-White ethnic group. TheInternational Organization for Migration, by contrast, has estimated that the number of Chinese people in Liverpool could range between 25,000 and 35,000.[4–
လီဗာပူး မြို့တော်ခန်းမ ရှေ့မှာ
မြင်း နှစ် အတွက် မြင်းရုပ်ပုံလို မီးအိမ်ကြီးနဲ့အခြား
သိုင်း အစွမ်းပြ မျိုးစုံ ထဲက.. ကလေးငယ်လေးတွေ..အစွမ်းပြနေပုံလေးက.ချစ်စရာလေး..နော်..။
ဒါနဲ့ ..ပုံတွေ.ကြီးလွန်း များလွန်းလို့ ထင်တယ်.. ။
ပိုစ့်က.. နည်းနည်း..မြင်ရတာ… ရှုပ်ထွေးနေတယ်. .။
အောက်ပိုင်းက..ပုံတွေ စာတွေ..မြင်ရ ခက်ပါဘိတောင်း…
နောက်တခေါက် ကြေးမုံ က တဲ့ပုံတင်ဗျာ
နှစ်ပေါင်း ၄၀ အထိ လုပ်ကိုင်ခွင့်ရမည့် ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း အားလုံးနီးပါးကို အေးရှားဝေါလ်၊ ရွှေတောင်၊ IGE နှင့် CPI ကဲ့သို့သော တရုတ်ကုမ္ပဏီ များကသာ ရယူထား
နှစ်ပေါင်း ၄ဝ အထိ လုပ်ကိုင်ခွင့်ရမည်ဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံတွင် တည်ဆောက်ရန် စီစဉ်ထားသော ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း အားလုံးနီးပါးကို အေးရှားဝေါလ်၊ ရွှေတောင်၊ IGE နှင့် မြစ်ဆုံဆည် တည်ဆောက်ခွင့်ရရှိ ထားသည့် CPI ကဲ့သို့ တရုတ်အခြေစိုက် ကုမ္ပဏီများကသာ လုပ်ကိုင်ခွင့်များ ရရှိခဲ့သည်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံတွင် တည်ဆောက်ပြီးစီးသည့် ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းပေါင်း ၂၂ ခုရှိပြီး တည်ဆောက်ဆဲ စီမံကိန်းပေါင်း ၁၄ ခုရှိကြောင်းနှင့် တည်ဆောက်ရန်အတွက် လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးနှင့် လက်မှတ်ရေးထိုး ရန်စီစဉ်နေသည့် စီမံကိန်းပေါင်း ၅ဝ အထိရှိကြောင်း ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရသည်။
ဆက်လက် တည်ဆောက်ရန်နှင့် တည်ဆောက်ရန်အတွက် လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး၊ ရေထိုးရန်စီစဉ်ဆဲ စီမံကိန်းပေါင်း ၅ဝ အား ပုဂ္ဂလိကသို့ တည်ဆောက်ခွင့် ပြုမည်ဖြစ်ပြီး တည်ဆောက်ခွင့် ပြုရာတွင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် BOT စနစ်ဖြင့် လည်းကောင်း၊ ဖက်စပ်ပိုင် JV\_BOT စနစ်ဖြင့်လည်းကောင်း တည်ဆောက်ခွင့် ပြုမည်ဖြစ်သည်။
ပုဂ္ဂလိကသို့ တည်ဆောက်ခွင့်ပြုမည့် စီမံကိန်းပေါင်း ၅ဝ တွင် ၁ဝ ပုံတစ်ပုံဖြစ်သော စီမံကိန်းငါးခုသာလျှင် ဥရောပနိုင်ငံအချို့နှင့် ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်ရန် စီစဉ်ထားပြီး ကျန်ရှိသော ၄၅ ခုတွင် အားလုံးနီးပါးမှာ တရုတ်ကုမ္ပဏီသီးသန့်၊ တရုတ်ကုမ္ပဏီနှင့် မြန်မာကုမ္ပဏီဖက်စပ်၊ ပြည်တွင်းရှိ အေးရှားဝေါလ်၊ ရွှေတောင်၊ IGE ကုမ္ပဏီများကသာ တည်ဆောက်လုပ်ကိုင်ခွင့် ရရှိထားသည်ဟု ထုတ်ပြန်ထားသည်။
စီမံကိန်းပေါင်း ၄၅ ခုတွင် တရုတ်နိုင်ငံ မှ CPI ကုမ္ပဏီနှင့် မြန်မာနိုင်ငံမှ အေးရှားဝေါလ်ကုမ္ပဏီတို့ ပူးပေါင်း၍ စီမံကိန်း ခုနစ်ခုကို လည်းကောင်း၊ အေးရှားဝေါလ် ကုမ္ပဏီမှပင် အခြားတရုတ် အခြေစိုက်ကုမ္ပဏီ နှစ်ခု၌ ပူးပေါင်း၍ စီမံကိန်းနှစ်ခုကို လည်းကောင်း လုပ်ကိုင်ခွင့် ရရှိထားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံမှ IGE ကုမ္ပဏီနှင့် တရုတ် နိုင်ငံမှ YPIC International ကုမ္ပဏီတို့ ပူးပေါင်း၍ စီမံကိန်းလေးခုကို လည်းကောင်း၊ IGE ကုမ္ပဏီမှပင် အခြားတရုတ် ကုမ္ပဏီများနှင့် ပူးပေါင်း၍ နောက်ထပ်စီမံကိန်း လေးခုကို လည်းကောင်း လုပ်ကိုင်ခွင့် ရယူထားကြသည်။
ရွှေတောင်ကုမ္ပဏီသည်လည်း တရုတ်နိုင်ငံမှ CDOI ဖြင့်ပူးပေါင်းကာ ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း ၁ဝ ခုအထိ တည်ဆောက်လုပ်ကိုင်ခွင့် ရရှိထားသည်။
ရွှေတောင်၊ IGE ကုမ္ပဏီ၊ အေးရှားဝေါလ် ကုမ္ပဏီများဖြင့် ပူးပေါင်းထားသည့် တရုတ်ကုမ္ပဏီများအပြင် အခြားသော တရုတ်ကုမ္ပဏီ အများအပြားသည်လည်း မြန်မာ့ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်း ၁၂ ခုကို လုပ်ကိုင်ခွင့် ရရှိထားသည်။
အေးရှားဝေါလ်ကုမ္ပဏီနှင့် တရုတ်နိုင်ငံ မှ CPI ကုမ္ပဏီဆိုလျှင် ဧရာဝတီမြစ်ဆုံ၊ ချီဖွေ၊ လိုက်ဇာ၊ ဝူဆောက်၊ ခေါင်လံဖူး၊ ယီနန်၊ ဖီဇောကဲ့သို့သော အနည်းဆုံး မဂ္ဂါဝပ် ၁၂ဝဝ မှ အများဆုံး ၆ဝဝဝ အထိထွက်ရှိမည့် စီမံကိန်းများကို တည်ဆောက်ခွင့် ရထားခြင်းဖြစ်သည်
ထို့အတွက် စီမံကိန်းပေါင်း ၄၅ ခု၌ ရွှေတောင်၊ IGE၊ အေးရှားဝေါလ်နှင့် တရုတ်ကုမ္ပဏီများက ၃၉ ခုအထိ တည်ဆောက် လုပ်ကိုင်ခွင့် ရရှိထားပြီး စီမံကိန်းအားလုံးနီးပါးမှာလည်း နှစ်ပေါင်း ၄ဝ အထိ လုပ်ကိုင်ခွင့် ရရှိမည့်စနစ်ဖြင့် လုပ်ကိုင်ခွင့် ရရှိထားကြခြင်းလည်း ဖြစ်သည်။
အေးရှားဝေါလ်ကုမ္ပဏီနှင့် တရုတ်နိုင်ငံ မှ CPI ကုမ္ပဏီဆိုလျှင် ဧရာဝတီမြစ်ဆုံ၊ ချီဖွေ၊ လိုက်ဇာ၊ ဝူဆောက်၊ ခေါင်လံဖူး၊ ယီနန်၊ ဖီဇောကဲ့သို့သော အနည်းဆုံး မဂ္ဂါဝပ် ၁၂ဝဝ မှ အများဆုံး ၆ဝဝဝ အထိထွက်ရှိမည့် စီမံကိန်းများကို တည်ဆောက်ခွင့် ရထားခြင်းဖြစ်သည်။
၎င်းအပြင် အေးရှားဝေါလ် ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်း အနေဖြင့်လည်း မဂ္ဂါဝပ် ၁၂ဝ အထိ ထွက်ရှိသည့် သောက်ရေခပ် (၂) ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းကို BOT စနစ်ဖြင့် တည်ဆောက် လုပ်ကိုင်ခွင့် ရရှိထားပြီး ယခုအခါ လျှပ်စစ်စွမ်းအား ဝန်ကြီးဌာနမှပင် အေးရှားဝေါလ် ကုမ္ပဏီမှ တစ်ယူနစ် ကျပ် ၇ဝ ပေးကာ ပြန်လည် ဝယ်ယူနေရပြီဖြစ်သည်။
ရွှေတောင်ကုမ္ပဏီ ဆိုလျှင်လည်း တရုတ်နှင့် ပူးပေါင်းတည်ဆောက်မည့် စီမံကိန်းများမပါ ၎င်းတို့တစ်ဦးတည်း အနေဖြင့် ဘီလူးချောင်း (၃) ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းကို တည်ဆောက်လုပ်ကိုင်ခွင့် ရရှိထားရာ စီမံကိန်းပင် ပြီးစီးတော့မည်ဖြစ်ပြီး ထပ်မံ၍ တရုတ်ကုမ္ပဏီနှင့် ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်ခွင့် ရရှိထားသည့် စီမံကိန်း ၁ဝ ခုထဲတွင်လည်း စက်တပ်ဆင်အား မဂ္ဂါဝပ် ၄ဝဝဝ အထိရှိသည့် ရွာသစ်စီမံကိန်းကဲ့သို့ စီမံကိန်းကြီးများလည်း ပါဝင်လျက်ရှိသည်။
IGE ကုမ္ပဏီမှ တရုတ်ကုမ္ပဏီများနှင့် ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်ခွင့် ရရှိထားသည့် စီမံကိန်း ရှစ်ခုထဲတွင်လည်း မြန်မာနိုင်ငံ၌ စက်တပ်ဆင်အား အကြီးမားဆုံး ဖြစ်လာမည့် မဂ္ဂါဝပ် ၇၁၁ဝ ရှိသော အထက်သံလွင် (မိုင်းတုံ) စီမံကိန်းမှအစ မဂ္ဂါဝပ် ၁၃၆ဝ စက်တပ်ဆင် အားရှိမည့် ဟတ်ကြီးစီမံကိန်း၊ မဂ္ဂါဝပ် ၁၂ဝဝ ရှိသည့် နောင်ဖ စီမံကိန်းကဲ့သို့သော စီမံကိန်းကြီးပေါင်းများစွာကို လုပ်ကိုင်ခွင့် ရရှိထား ခြင်းဖြစ်သည်။
သို့သော် IGE ကုမ္ပဏီသည် နော်ချမ်းခ မြစ်ပေါ်တွင် တည်ဆောက်မည့် စီမံကိန်းများအတွက် MOA ရေးထိုးထားမှုအရ ၎င်းအတွက် အကျိုးအမြတ် နှစ်ရာခိုင်နှုန်းသာရပြီး ၎င်းဖြင့် ပူးပေါင်းသည့် တရုတ်ကုမ္ပဏီက ၈၃ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ရရှိကာ နိုင်ငံတော်က ၁၅ ရာခိုင်နှုန်းသာ ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
စီမံကိန်းများ အားလုံးထဲတွင်လည်း အနည်းငယ်သာ အခြေအနေအရ လုပ်ကိုင်ခွင့် မရှိနိုင်သည်ကလွဲ၍ အများစုမှာ ၎င်းတို့သာ လုပ်ကိုင်ခွင့်ရကြမည် ဖြစ်သည်။
လက်ရှိလုပ်ကိုင်ခွင့် ပြုထားသည့် အနေအထားများအရ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အနာဂတ် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးသည့် လုပ်ငန်းမှာ တရုတ်ကုမ္ပဏီများနှင့် ရွှေတောင်၊ IGE ၊ အေးရှားဝေါလ်ကဲ့သို့ အခွင့်ထူး၊ အခွင့်ကောင်းများ ရလေ့ရှိသည့် ပြည်တွင်းကုမ္ပဏီ သုံးခု၏ လက်ဝယ်တွင်သာ ရှိမည်ဖြစ်သည်။
– See more at:http://www.news-eleven.com/local/%E1%82%8F%E1%80%BD%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8-%E1%81%84%E1%81%80-%E1%80%A1%E1%80%91%E1%80%AD-%E1%80%9C%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%81%E1%80%BC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B7%E1%80%9B%E1%80%99%E1%80%8A%E1%80%B9%E1%80%B7-%E1%80%B1%E1%80%9B%E1%80%A1%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%9C%E1%80%BD%E1%80%BA%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%85%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%85%E1%80%AE%E1%80%99%E1%80%B6%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8-%E1%80%A1%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%9C%E1%80%B6%E1%80%AF%E1%80%B8%E1%80%94%E1%80%AE%E1%80%B8%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%AF-%E1%80%B1%E1%80%A1%E1%80%B8%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%81%80%E1%80%AB%E1%80%9C%E1%80%B9%E1%81%8A#sthash.F2rYfoGQ.dpuf
အဲဒီ ၊ ဘီလျှံ ဒေါ်လာ စီမံကိန်းကြီးတွေသာ ပြီးသွားရင် ၊
အဲဒီ့ ကုမ္ပဏီ တွေ ဘယ်လောက်တောင် ချမ်းသာသွားကြမယ် ဆိုတာ ၊
မှန်းတောင် မမှန်းနိုင်ဘူး ။ အင်းးးး ခရိုနီ ။ ခရိုနီ ။
ရွှေတောင် ( အာရှဓန ဦးအိုက်ထွန်း )
IGE ( ကြံ့ဖွတ် ဦး အောင်သောင်း ရဲ့သား )
အေးရှားဝေါလ် ( ဘိန်းဘုရင် လော်စစ်ဟန် ရဲ့သား )
ဦးကြောင် နှင့် ကျနော်နှင့် ကွာတာ တစ်ခုဘဲ ရှိတယ် ။
ဦးကြောင် က အဲဒီ အဖြစ်အပျက်တွေအတွက် တရုတ်ကြီး ကို အပြစ်တင်ချင်တယ် ။
ကျနော်ကတော့ တကယ့် အဓိက အပြစ် / အမှား ဟာ ၊
ဒီ တင်ဒါတွေ ချပေးခဲ့တဲ့ ယခင် နှင့် ယခု အစိုးရမှာသာ အဓိက အပြစ် ရှိတယ် ထင်တယ် ။